မူးယစ်ဆေး တိုက်ဖျက်ရေး အစိုးရ မူဝါဒ လက်တွေ့မှာ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သလား ? | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း မူးယစ်ဆေး တိုက်ဖျက်ရေး အစိုးရ မူဝါဒ လက်တွေ့မှာ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သလား ?
မူးယစ်ဆေး တိုက်ဖျက်ရေး အစိုးရ မူဝါဒ လက်တွေ့မှာ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သလား ?
မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အစိုးရရဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့ စီမံကိန်းတွေ လက်တွေ့မှာ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သလားဆိုတာ ဘယ်ပေါင်းစုံကနေ ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၂၆) ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ (၃၃) ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါး အလွဲသုံးမှုနှင့် တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့မှာ ကျဆင်းမှု မရှိပဲ မြင့်မားနေဆဲဖြစ်တဲ့ မူးယစ်ဆေး ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ဖြူး၊ သုံးစွဲမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးရရှိမှု အခြေအနေတွေအပေါ် သုံးသပ်ပြီး အဲ့ဒီအသင်းရဲ့ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးတိတ်နိုင်က ပြောကြားလိုက်တာပါ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) ဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ အရေးအပြင် အကျဉ်းထောင်တွေထဲ အကျဉ်းသားအခွင့်အရေး မြှင့်တင်မှု လုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူ မူးယစ်ဆေးနဲ့ အခြားပြစ်မှုတွေနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျ အကျဉ်းသားတွေအတွက် စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကိုပါ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Previous article#ALIVE ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား လက်မှတ် ၂သိန်းကျော်ရောင်းရ
Next articleမူးယစ်ဆေး ပြဿနာရဲ့ ဆိုးယွားတဲ့ အကျိုးဆက်ကို အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေ အဓိက ခံစားနေကြရ